Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na-online azụmahịa na-echekwa a otutu mwute ozi na ego data na nnọchite nke gị ahịa na ọrụ, mgbe ahụ, ị ​​mkpa ka a insured megide hackers onye na-ezu ohi ozi nche. I nwere ike ikpughe ego ozi nke ọrụ gị na imebi ha ego ma ọ bụrụ na internet hackers mbanye anataghị ikike n'ime gị na saịtị na-ezu ohi mwute data - na nke a nwere ike itinye gị na azụmahịa na oké ize ndụ. Ma na a cyber ibu mkpuchi iwu cover na ebe, na ị na-mma na-echebe megide internet ize ndụ nke pụrụ imebi gị ma ọ bụ gị ahịa.
Ị maara na Yahoo na LinkedIn n'etiti ndị ọzọ nọ na hacked n'ime na nso nso, megideghị onye nkọwa nke ọtụtụ nde Yahoo email na azụmahịa ọrụ? Mgbalị nwekwara e mere na-ezu ohi kaadị na onwe ọmụma si azụmahịa saịtị tupu, na ị na-achọghị itinye onwe gị dị otú ahụ dị ize ndụ na-enweghị etinye a nchekwa net ebe. Unu mgbe na-eche na ọ bụ ibu ọrụ nke gị na mba ụlọ ọrụ iji chebe gị data site hackers, n'ihi na ha nwere ike n'ezie ịbụ niile na ịdabere. Ya mere ị na-ekwesịghị itinye nche nke gị website n'aka ndị weebụ gị na mba ụlọ ọrụ, ọ bụ ezie na ha na-agbalị niile kwere omume bests iji chebe data nke weebụsaịtị na ha n'elu ikpo okwu.
E nwere otu ụlọ ọrụ ịnshọransị na ipuiche cyber ibu mkpuchi, na ị nwekwara ike ịzụ ahịa online ịzụta mkpuchi gị online azụmahịa. Ndị a cyber ibu ụlọ ọrụ ịnshọransị ga-amata na etoju nke nwere internet ọgụ ị na-eche na proffer firewall nchebe na-echebe gị data na nche ọmụma, na mgbe ahụ dọpụta ihe mkpuchi iwu mkpuchi iji chebe gị online azụmahịa. Gị insurer ga-enwe ike ọma chefuo na ị ma chebe gị si dị oké ọnụ a gbara akwụkwọ, ọnwụ nke azụmahịa, na a mebiri emebi online aha.
Mgbe ị na-atụle elu-tech potentials nke hackers na ihe ize ndụ ha abụrụ gị internet azụmahịa na ndị ahịa, ị ga-chọrọ ichebe ahịa 'data na onwe nkọwa site na cyber ibu mkpuchi taa. Ọ bụrụ na nnukwu corporations nwere ike iche na-aga n'ihu na internet ọgụ, mgbe ahụ, ị ​​na-isịneke; ma ọ bụrụ na gị na online azụmahịa bụ uru ọ bụla, mgbe ahụ, ọ pụrụ ịbụ a praịm lekwasịrị online hackers. Cyber ​​ibu mkpuchi nwere ike ịbụ na azụ na-elu-nche atụmatụ gị mkpa, na o nwere ike eme ka ndị niile dị iche n'etiti online ịga nke ọma na ọnwụ nke azụmahịa tinyere emetụtaghị okwu ikpe. Gaa maka otu taa, na ị ga-enwe obi ụtọ na i mere.